Abavelisi bezixhobo zonyango kunye nababoneleli - iTshayina yezixhobo zonyango
I-Virus Sampling Tube yethu ye-Assembling Line isetyenziselwa ikakhulu ukugcwalisa uthutho oluphakathi ukuya kwiityhubhu zesampulu zentsholongwane. Ngobungakanani obuphezulu bokuzenzekelayo, ukusebenza kakuhle kwemveliso, kunye nolawulo lwenkqubo elungileyo kunye nolawulo lomgangatho.
Umgca wokuzaliswa kweHemodialysis usebenzisa iteknoloji ephezulu yaseJamani kwaye yenzelwe ngokukodwa ukuzaliswa kwe-dialysate. Inxalenye yalo matshini inokuzaliswa yimpompo yentsimbi okanye impompo yesirinji ye-316L. Ilawulwa yi-PLC, ngokuchaneka kokugcwalisa okuphezulu kunye nohlengahlengiso olufanelekileyo kuluhlu lokugcwalisa. Lo matshini uyilo olusengqiqweni, uzinzo kunye nokusebenza okuthembekileyo, ukusebenza ngokulula kunye nokugcinwa, kwaye uhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno ze-GMP.
Ukusetyenziswa komatshini wokuqokelelwa kwegazi ngenaliti kusetyenziswa uhlobo lwepeni yokuqokelela igazi indibano yemveliso yenaliti. Igcwele ngokuzenzekelayo. Ukusebenza okukhuselekileyo kunye nokukhuselekileyo kunye nolawulo lwe-PLC kunye ne-HMI, kufuneka kuphela abasebenzi be-3-4 bakwazi ukuqhuba umgca wonke kakuhle. Xa kuthelekiswa nabanye abavelisi, umatshini wethu wokuqokelela igazi wenaliti unomlinganiso omncinci ngokubanzi, ukuzinza okuzinzileyo kunye nokuqonda, inqanaba lesiphoso esisezantsi kunye neendleko zokugcina, njl.
Umgca wokuvelisa ityhubhu yokuqokelela igazi uquka ukulayishwa kwetyhubhu, i-Chemical dosing, ukomisa, ukumisa kunye nokucofa, ukucoca, ukulayishwa kwetreyi, njl njl njl.
Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer,